हाम्रो खबर सोमबार, मङ्सिर १३ २०७८
आज मिति २०७८ मंसिर १३ गते सोमवार, तदनुसार २९ नोभेम्बर २०२१, मार्गशीर्ष कृष्णपक्ष दशमी तिथि,उत्तरफाल्गुनी नक्षत्र, १७ः५२ बजे उप्रान्त हस्ता, चन्द्रमा कन्या राशिमा । तपाईंको आजको राशीफल यसप्रकार छ–
अवसरको खोजीमा केही दौडधुप गर्नुपर्ला। छर–छिमेकमा असमझदारी बढ्ने देखिएकाले होसियारीसाथ काम लिनुपर्ला। आकस्मिक खर्च बढ्नुका साथै अर्थ अभाव देखापर्न सक्छ। पछिका लागि केही वस्तु त्याग्नुपर्ला। प्रयत्न गर्दा विदेशयात्रा गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ। परिवेश खर्चिलो देखिए पनि सत्कार्यमा खर्च गरिनेछ। अरूलाई दिएर आनन्द लिने समय छ ।
मन मिल्ने साथी भेटिनुका साथै प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिलो हुनेछ। कामको चापबाट फुर्सद पाइनेछ। व्यवसायले मनग्गे आम्दानी दिलाउनेछ। विभिन्न सहयोग र उपहार हातलागी हुनेछ। परिवारजनको साथले नयाँ आशा जगाउनेछ। रमाइलो यात्रा गर्ने साइत जुर्नेछ। अतिथिका रूपमा मानसम्मान प्राप्त होला। टाढिएका साथीभाइसँग भेटघाट हुनेछ ।
खोई २५ लाख खोप ? कर्पोरेट हाउसतिर !
हाम्रो खबर १३ दिन अगाडी
हाम्रो खबर १४ दिन अगाडी
हाम्राेखबर २४ दिन अगाडी